MANGARANO TOAMASINA : Lehiben’ny mpanao fanafihana mitam-piadiana voatifitry ny polisy
Mitohy ilay hetsika manokana ataon’ny polisy ao Toamasina iadiana amin’ny asan-jiolahy. Manao ranolava ny vokatra azo. 18 septembre 2017
Ny marainan’ny zoma 15 septambra, raha tsiahivina dia lavon’ny balan’ny polisy avy ao amin’ny boriborintany voalohany tao Ambalabe i Tsiala 25 taona, mpanendaka ikoizana. Ny zoma 15 septambra hifoha ny sabotsy 16 septambra indray , dia nisy ny hetsika manokana nataon’ny polisy avy amin’ny Kaomisaria foibe notarihin’ny Kaomisera Razafindahy Manitra Fleurys tao Mangarano.
Andian-jiolahy mpanao fanafihana mitam-piadiana no nifanenjehana. Vokany, naratra mafy vokatry ny tifitra nahazo azy ny iray raha tafatsoaka kosa ireo namany. Mbola tsaboina ao amin’ny Hopitaly Be Toamasina ilay jiolahy naratra mafy. Raha ny fanazavana voaray avy amin’ny Kaomisera Razafindahy Manitra Fleurys , dia tena jiolahy ikoizana tokoa ity naratra voan’ny bala ity.
Mpampihorohoro ao amin’ny faritra Mangarano. Karohina fatratra ireo namany tafatsoaka. Any amin’ireo tafatsoaka ireo mantsy ireo fitaovam-piadiana mahery vaika fampiasa amin’ny fanafihana.